विप्लवका छोरा प्रकाशसंग काँधमा-काँध मिलाएर संघ'र्षमा उत्रिएकी को हुन् यि युवती ? - Sidha News
विप्लवका छोरा प्रकाशसंग काँधमा-काँध मिलाएर संघ’र्षमा उत्रिएकी को हुन् यि युवती ?
काठमाडौं। भरतपुर महानगरपालिका–९, शरदपुर घर भएकी मान्यता अहिले सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरुमा चर्चित छन् । चितवन मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत मान्यता मेडिकल कलेजले विद्यार्थी माथि गरिरहेको आर्थिक शोषणको विरुद्ध आन्दोलनमा छन् । उनी विद्यार्थीसंग बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजवि’रुद्धको आ’न्दोलनमा होमिएकी छन् ।
कलेजको ज्यादतीवि’रुद्ध आवाज उठाउन अरु विद्यार्थीलाईसमेत प्रोत्साहन गर्ने मान्यता चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिकी एक जिम्मेवार सदस्यको रुपमा कार्यरत छन् । सोही अभियानको नेतृत्व गरेका छन् नेत्र विक्रम चन्द विप्लवका छोरा प्रकाश चन्दले । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सरकारद्वारा प्रतिब’न्धित पार्टी नेकपाका महासचिव हुन् ।
सुरुमा चितवन मेडिकल कलेजले गरेको आर्थिक शोषण वि’रुद्ध सुरु भएको आन्दोलन अहिले काठमाडौं सम्म आइपुगेको छ । यो अभियानमा विक्रम र मान्यता संगसंगै छन् । उनीहरुले मुलुकभरका मेडिकल कलेजले गरेको आर्थिक शोषण वि’रुद्ध आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् ।
यही समितिको नामबाट प्रकाश र मान्यता मेडिकल कलेजको ज्यादतीविरुद्ध संघ’र्षमा लागिरहेका छन्, उनीहरुलाई साथ दिइरहेका छन् अरु विद्यार्थीहरुले । संघर्ष समिति संयोजक हुन् प्रकाश । उनको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेकाले मेडिकल कलेजहरु पनि दबाबमा परेका छन् । मेडिकल कलेजको ज्यादतीविरुद्ध संघर्ष गर्दागर्दै उनीहरुबीच व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि निकटता बढेको साथीहरुबीच कुरा हुन थालेको छ । प्रकाशले सुरुवात गरेको आन्दोलनमा काँध थापेर अघि बढेकी हुन् मान्यताले । उनीहरुबीच बढेको निकटताबारे प्रकाश र मान्यताले केही बताएका छैनन् ।’